दाङमा सहकारी मर्जको अभियान सुरु « Khoj Raftar
दाङमा सहकारी मर्जको अभियान सुरु
१९ कात्तिक । दाङमा पनि सहकारी मर्जको अभियान थालिएको छ । गत बर्ष देखि दाङ जिल्लामा पनि सहकारी मर्जको अभियान थालिएको हो । चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८मा जिल्लामा दुई सहकारीलाई मर्ज भएका छन् ।
देउखुरी राप्ती गाउँपालिका ५ सिसहनियामा रहेको हरियाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लमही नगरपालिका स्थित दियो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई मर्ज गरिएको हो । हाल हरियाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नामवाट संचालन गरिएको छ । सहकारीको केन्द्रिय कार्यालय सिसहनियामा राखिएको छ । भने लमही ५ वाट सहकारी सदस्यलाई सेवा दिंदै आएको छ ।
दुई सहकारीका बीचमा समान उद्देश्य मिलेपछि मर्ज गरिएको जिल्ला सहकारी संघ दाङका अध्यक्ष गोबिन्द प्रसाद शर्माले जानकारी गराउनुभयो । सहकारीको सेयर लगानी बचतको हिसाव किताव गरी मर्जको निर्णय गरिएको थियो । यस्तै गत आर्थिक बर्ष २०७६ मा पनि दुई सहकारी मर्ज भएका थिए । लमही नगरपालिका स्थित मातृभुमी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र तेजस्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. लाई मर्ज गरिएको हो । दुई सहकारी मर्ज भएर तेजस्वी मातृभूमि सहकारी संस्था नामाकरण गरिएको छ ।
अहिले तेजस्वी मातृभुमि मातृभुमी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट एकिकृत रुपमा कारोबार गर्दे आएको जानकारी गराईएको छ । यसैगरी जिल्लामा अन्य सहकारी पनि मर्जको तयारीमा छन् । जिल्ला सहकारी संघले सहकारी मर्ज अभियानलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । “सानो भएर के काम हुन्छ ? बलियो भएर सेवा दिने हो ।’ संघका अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो ।
सहकारी मर्जको अभियान जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रवाट थालिएको छ । जिल्लाका घोराही र तुलसीपुरमा भने अहिलेसम्म कुनैपनि सहकारी मर्ज भएका छैनन् । मर्जको काम जिल्ला भर हुने सहकारी संघका अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । अन्य सहकारीलाई पनि मर्जको तयारी थालिएको छ । जिल्लाका सहकारीहरुले मर्जका लागि निर्णय गरी योजना अगाडी बढाएको उहाँको भनाई छ । मर्जलाई अभियानकै रुपमा अगाडी बढाइने संघको निर्णय छ । घोराही र तुलसीपुरमा रहेका केही सहकारीले पनि मर्जका लागि कुराकानी अघी बढाइरहेको बुझिएको छ ।
संघका अध्यक्ष शर्माले सहकारी एकीकरणको अभियानलाई जोड दिँदै व्यापक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सहकारी संस्थाहरुको स्थापना संख्यात्मक रुपमा उल्लेख्नीय वृद्धि भएको र सहकारी संस्थाहरुको सेवालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक, दिगो एवं सुदृढ बनाउन आवश्यक भएको शर्माले बताउनुभयो । समान प्रकृति र भूगोलका आधारमा एकीकरण एक महत्वपूर्ण विकल्प रहेको उहाँको भनाई रहेको छ ।
यता घोराही उपमहानगरपालिकामा सहकारी मर्जको मापदण्ड तयारी थालिएको छ । प्रदेशको मापदण्डलाई आधार बनाएर तयार गरिने सहकारी शाखा प्रमुख होमलाल भुषालले बताउनुभयो । “प्रदेशको मापदण्डलाई आधार बनाएर स्थानीयतहले आफ्ना कुरा राख्दै मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, ती काम गरिने छ उहाँले भन्नुभयो । अहिले जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि सहकारी मर्जका लागि जिल्ला सहकारी संघले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । जिल्लामा केही समय अगाडीको तथ्याङ्क अनुसार छ सय २५ सहकारी रहेका छन् ।